ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ ရုံးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ date လုပ်သင့်လား?? - For her Myanmar
ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ ရုံးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ date လုပ်သင့်လား??
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို သဘောကျမိတာက အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တွဲသင့် မတွဲသင့်ဆိုတာကတော့….
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာမှဖြစ်ပေါ်မယ် ဘယ်သူနဲ့ချစ်ဖို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးနော်။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့လဲ ဆုံစည်းချင်ဆုံစည်းမယ်… ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲ အကြောင်းပါချင်ပါမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာရော…??? ရင်ခုန်ဘက်တွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ရင်ခုန်စရာလူတွေ ရုံးမှာတွေ့လာရတဲ့အခါ သဘောကျသင့်ရဲ့လား?? တွဲသင့်ရဲ့လား?? စဉ်းစားရခက်နေရင် ဒီအက်ဒမင်က ကောင်းတာ ဆိုးတာလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်လေနော်…
ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာတွေ ရှိရင် အလုပ်လဲလုပ်၊ date လဲ date ဆိုတော့ သီးသန့်အချိန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က department တစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့ရင် အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်မှားနေတဲ့အရာတွေ၊ ကိုယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ထောက်ပြလို့ရတော့ နားလည်မှုလည်း ပိုတိုးတာပေါ့နော်။
Related Article >>> လုပ်ငန်းခွင်မှာ စတိုင်လ်ကျ လှပနေစေဖို့ 
အလုပ်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိလာတဲ့အခါ ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေကို အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဖုန်းဆက်ပြီး ရင်ဖွင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို အမြဲနှစ်သိမ့်ပေးမယ့်လူ အနီးအနားမှာပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ သိပ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းနေမှာ အသေအချာပါနော်။
တစ်ရုံးတည်းနေ၊ အလုပ်တူတူလုပ်တဲ့အတွက် Overtime (အချိန်ပို) ရှိလို့ နောက်ကျမှာတွေ၊ Team dinner (အလုပ်ညစာစားပွဲတွေ) ရှိလို့ အိမ်ပြန်မိုးချုပ်မှာတွေအတွက် စိတ်ပူနေစရာမလိုတော့ပါဘူး… ပြီးတော့ သဝန်တို အူတို ကိစ္စလေးတွေလဲ မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့….
Related Article >>> Date လုပ်တာနဲ့ နှစ်ယောက်အတူ အပြင်ထွက်လည်တာ အတူတူပဲလား။
ဒီလိုဆို ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ချစ်သင့်ပြီလား?? တွဲသင့်ပြီလား?? ခဏနေပါဦး… ဆိုးကျိုးလေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်…
အလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ အချစ်အကြောင်းတွေမှာပဲ စိတ်ရောက်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ work performance ကို အများကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ တစ်ချို့ရုံးတွေမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း မ date ရဆိုတဲ့ rule တွေပေါ်လာစေတာပေါ့။
Relationship ဆိုတာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အေးစက်သွားတဲ့ သဘာဝမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ခဏခဏတွေ့ရ၊ အချိန်တော်တော်များများကို သူနဲ့အတူဖြတ်သန်းရလို့ အားကျရတဲ့ စုံတွဲလေးရယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ကြပေမဲ့ တွေ့ပါများလာတဲ့အခါမှာ မရိုးအီလာဘူး စိတ်မကုန်နိုင်ဘူးလို့ တပ်အပ်ပြောနိုင်ပါ့မလား??
မတော်တဆ ဒီ relationship ကြီး ပြတ်စဲသွားခဲ့ရင်…
ကျောင်းတုန်းက ကိုယ်တွဲတဲ့လူနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့အခါ မခေါ်မပြောတွေဖြစ်ပြီး သူနဲ့နီးစပ်ရာတွေနဲ့ပါ မပေါင်းသင်းကြတော့တာ ဟုတ်?? ခုအဲ့ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုဆိုးပါတယ်။ အလုပ်ကြောင့် မခေါ်မပြောလို့ကလဲ မရ၊ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကလဲ ပြတ်စဲထား…. တော်တော်ကို နေရခက်မယ့် အခြေအနေမျိုးပါ။
ဒီကြားထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်က ရာထူးတိုးပြီး ပြောင်းတာရွှေ့တာ၊ အလုပ်ပြောင်းတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် တော်တော်ကို ညှိယူရတော့မယ့် အနေအထားမျိုးပါ။
လူသိရှင်ကြားတွဲတာဟာ ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ တိတ်တဆိတ်တွဲတဲ့အခါ နံရံမှာနားတွေ ရှိတယ်ဆိုသလိုပဲ အချင်းချင်းပြောမိရာက တဖြည်းဖြည်းပေါက်ကြား အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလိုဆို ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို တွဲသင့် မတွဲသင့် ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် လုံလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။
သာယာလှပတဲ့ အချစ်ရေးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း….
Thu ( For Her Myanmar )
Reference : US News , Love & Harmony
လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို သဘောကမြိတာက အပွဈမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ တှဲသငျ့ မတှဲသငျ့ဆိုတာကတော့….
အခဈြဆိုတာ ဘယျနရော ဘယျအခြိနျမှာမှဖွဈပျေါမယျ ဘယျသူနဲ့ခဈြဖို့ဖွဈလာမယျဆိုတာ ဘယျသူမှမသိနိုငျပါဘူးနျော။ သှားရငျးလာရငျးနဲ့လဲ ဆုံစညျးခငျြဆုံစညျးမယျ… ငယျငယျက သူငယျခငျြးတှနေဲ့လဲ အကွောငျးပါခငျြပါမယျ။ လုပျငနျးခှငျမှာရော…??? ရငျခုနျဘကျတှေ တှနေို့ငျပါတယျ။
ဒီလို ရငျခုနျစရာလူတှေ ရုံးမှာတှလေ့ာရတဲ့အခါ သဘောကသြငျ့ရဲ့လား?? တှဲသငျ့ရဲ့လား?? စဉျးစားရခကျနရေငျ ဒီအကျဒမငျက ကောငျးတာ ဆိုးတာလေးတှကေို ပွောပွပေးမယျလနေျော…
ရုံးမှာ အလုပျလုပျတဲ့အခြိနျမှာ အလုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆှေးနှေးတိုငျပငျစရာတှေ ရှိရငျ အလုပျလဲလုပျ၊ date လဲ date ဆိုတော့ သီးသနျ့အခြိနျပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
သူနဲ့ကိုယျနဲ့က department တဈခုတညျးဖွဈခဲ့ရငျ အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကိုယျမှားနတေဲ့အရာတှေ၊ ကိုယျလိုအပျနတေဲ့အရာတှကေို အခငျြးခငျြး အပွနျအလှနျထောကျပွလို့ရတော့ နားလညျမှုလညျး ပိုတိုးတာပေါ့နျော။
Related Article >>> လုပျငနျးခှငျမှာ စတိုငျလျကြ လှပနစေဖေို့
အလုပျမှာ စိတျညဈစရာတှရှေိလာတဲ့အခါ ဒီစိတျညဈစရာတှကေို အိမျပွနျရောကျမှ ဖုနျးဆကျပွီး ရငျဖှငျ့စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ကို အမွဲနှဈသိမျ့ပေးမယျ့လူ အနီးအနားမှာပဲ ရှိတယျဆိုတာ သိပျကို ကွညျနူးစရာကောငျးနမှော အသအေခြာပါနျော။
တဈရုံးတညျးနေ၊ အလုပျတူတူလုပျတဲ့အတှကျ Overtime (အခြိနျပို) ရှိလို့ နောကျကမြှာတှေ၊ Team dinner (အလုပျညစာစားပှဲတှေ) ရှိလို့ အိမျပွနျမိုးခြုပျမှာတှအေတှကျ စိတျပူနစေရာမလိုတော့ပါဘူး… ပွီးတော့ သဝနျတို အူတို ကိစ်စလေးတှလေဲ မရှိနိုငျတော့ဘူးပေါ့….
Related Article >>> Date လုပျတာနဲ့ နှဈယောကျအတူ အပွငျထှကျလညျတာ အတူတူပဲလား။
ဒီလိုဆို ရုံးက လုပျဖျောကိုငျဖကျကို ခဈြသငျ့ပွီလား?? တှဲသငျ့ပွီလား?? ခဏနပေါဦး… ဆိုးကြိုးလေးတှေ ပွောပွပေးမယျနျော…
အလုပျက လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ အခဈြအကွောငျးတှမှောပဲ စိတျရောကျနတေဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့ work performance ကို အမြားကွီးထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ဒီအခကျြကပဲ တဈခြို့ရုံးတှမှော လုပျဖျောကိုငျဖကျခငျြး မ date ရဆိုတဲ့ rule တှပေျေါလာစတောပေါ့။
Relationship ဆိုတာအခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အေးစကျသှားတဲ့ သဘာဝမြိုးရှိတတျပါတယျ။ အစပိုငျးမှာတော့ ခဏခဏတှရေ့၊ အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို သူနဲ့အတူဖွတျသနျးရလို့ အားကရြတဲ့ စုံတှဲလေးရယျလို့သတျမှတျနိုငျကွပမေဲ့ တှပေ့ါမြားလာတဲ့အခါမှာ မရိုးအီလာဘူး စိတျမကုနျနိုငျဘူးလို့ တပျအပျပွောနိုငျပါ့မလား??
မတျောတဆ ဒီ relationship ကွီး ပွတျစဲသှားခဲ့ရငျ…
ကြောငျးတုနျးက ကိုယျတှဲတဲ့လူနဲ့ ပွတျသှားတဲ့အခါ မချေါမပွောတှဖွေဈပွီး သူနဲ့နီးစပျရာတှနေဲ့ပါ မပေါငျးသငျးကွတော့တာ ဟုတျ?? ခုအဲ့ထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ ပိုဆိုးပါတယျ။ အလုပျကွောငျ့ မချေါမပွောလို့ကလဲ မရ၊ သူနဲ့ ကိုယျနဲ့ကလဲ ပွတျစဲထား…. တျောတျောကို နရေခကျမယျ့ အခွအေနမြေိုးပါ။
ဒီကွားထဲမှာ တဈယောကျယောကျက ရာထူးတိုးပွီး ပွောငျးတာရှတေ့ာ၊ အလုပျပွောငျးတာတှေ ဖွဈခဲ့ရငျ တျောတျောကို ညှိယူရတော့မယျ့ အနအေထားမြိုးပါ။
လူသိရှငျကွားတှဲတာဟာ ပွဿနာမဟုတျပမေဲ့ တိတျတဆိတျတှဲတဲ့အခါ နံရံမှာနားတှေ ရှိတယျဆိုသလိုပဲ အခငျြးခငျြးပွောမိရာက တဖွညျးဖွညျးပေါကျကွား အပကျြပကျြနဲ့ နှာခေါငျးသှေးထှကျတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
ကဲ ဒီလိုဆို ကိုယျသဘောကနြတေဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျကို တှဲသငျ့ မတှဲသငျ့ ဆုံးဖွတျဖို့အတှကျ လုံလောကျပွီထငျပါတယျနျော။
သာယာလှပတဲ့ အခဈြရေးလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး….
မျက်လုံးနားက အရေးအကြောင်းတွေကို ရှင်းထုတ်နိုင်မယ့် နည်း (၆)သွယ်
နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဧရာမသရဲစံအိမ် ဝင်ချက်စတာ ရဲ့ နောက်ခံ ရာဇဝင်